Akkaataa wayyaaneen liyyuu polisiidhaan milkoofte beektuu? - Gaachana Sabaa
Akkaataa wayyaaneen liyyuu polisiidhaan milkoofte beektuu?
October 12, 2017 October 21, 2017 Gaachana Sabaa
Yeroo waa’ee Liyyuu polisii dhageenyu yeroo baay’ee wanti nutti dhagahamu Somaalee Oromoo lolee nama nagaa ajjeesu,manatti marsee gubuu fi lafaa fi qabeenya isaa irraa buqqisu garuu wanti nuti hin beekne Liyyuu Polisiin uummata Somaaleeyyuu hin dhiisne,uummata isaanii warra lafa irraa haxaa’eedha.Garuu cubbuun isaan hojjetan adduunyaa biratti dhagahamaa hin jiru.
Baroota darban keessatti bulchiinsi Mallas Mormitoota isaa galmee shororkeessummaa irratti maqaa isaanii baasuuf Boombiidhaan of haleelaa akka ture icciitiin WikiLeaks irraa bahe waggoota muraasa duuba hunda keenya dhaqqabuun isaa yaadatamaadha.
Haatahuu malee Mootummaan wayyaanee warra dhihaatiif ergama isaanii sirnaan bahaa waan jiruuf rakkinni kun irratti mul’atus ija hamaan hin laalamne.kun immoo mormitootni hundi ija shororkeessummaatiin ilaalamuun waggoota dhufaniif itti fufa.
Mootummaan Etoophiyaa bitaa fi mirgaan Dhaabbattoota qabsoo waraaanaa geggeessanii fi Mormitoota qabsoo nagaa godhaniin cinqamuu irraan kan ka’e seera haaraa kan Farra shororkaa bara 2009,akka dararaan duraan lammii biyyattii irra gahaa ture gahaa hin taane baasuun akka itti adabaa ture fi harras itti jiru hunduu nii beekna.
Akka fakkeenyaatti Dr Mararaa fi Baqqalaa Garbaa fudhachuun nii danda’ama. Seerri kun biyyoota rakkina shororkeessummaa qaban keessattuu furmaata eegame sana akka hin buusne Adduunyaatu dubbachaa jira garuu Wayyaaneen seerri kun imaammata biyyota dhihaatiin Lammiilee biyyattii gaaffii mirga isaanii karaa nagaatiin gaafatan haal duree tokko malee ittiin adabuun ala gargaarsa ittiin kadhachuuf piroojektii waggaa dheeraaf wixiname lafa taa’eedha.
Haaluma kanaan Liyyuu Polisiin gargaarsa qajeellon mootummaa UK irraa argachaa akka ture beekamaadha.Wanti nama ajaa’ibsiisu dabalataan nyaatni yeroo baay’ee Liyyuu polisiin nyaatee ittiin ummata nagaa biyyattii lafa irraa duguugaa jiru gargaarsa nyaataa maqaa hongeen warra dhihaa irra uummataaf dhufee, Qaamoota waraanaaf ooluun isaa uummanni qabatamaan argeera.
Yaada kiyya duraatti dhufuuf Qaamni Liyyuu polisii jedhamu kun Mootummaa Wayyaaneetiin lenjifamanii hanga Mootummaa biyya biraatiin gargaaramanii fi Farra shororkaa jedhamanii yeroo uummata ofii irratti bobbahanii akka tasaa yoom irraa kaaseeti kan warri kun akka waan Soomaleen hidhattee daangaa lafa margaa irratti nu lolaniitti godhamee akkamitti hubatamuu danda’ee? Osoo midiyaaleen hedduun ammaan tana jiranitti.dhugaan jiru akkamitti karaa irraa mucuca’ee? Yeroo hunda Mootummaan ofii balleesse uummatumatti garagalee maaf itti haqataa? Dhugaa kana namni saaxilu maaf dhabame?
Wanti na ajaa’ibe nuti hedduun keenya miidiyaa irrattis lola daangaa Somaleen nurratti bantee jettanii hojii wayyaanee hojjechaa jirra maaloo maaloo Somaaleen nu hin lolle tokko,Lola daangaas hin qabnu lama,Waraana wayyaanee Liyyuu poolisii jedhamutu ergamee wayyaaneedhaan nu ajjeesaa jira.
Mootummaan wayyaanee uummata Tigrayiif kan dhaabbate tahullee uummata biyyattii eeguun hanga barcuma sana qabatee jirutti dirqama isaati.Ajaja akkamii akka fudhatan na ajaa’iba,Deemaa gara Oromiyaa uummata Oromoo ajjeesaa jedhamanii ergamuu moo akkami? dhugaan nuti beeknu Mootummaa Itoopiyaa akka maashinii ajjeechaatti Liyyuu Polisiitti fayyadamaa jira.
Dhugaatti Qawwee ofii keenyaa binneen of ajjeesuutti jirra.Akkamiin yoo jettan akkana,gibira namuu warra naannoo kamii caalaa baafna,Albuudaa biyya keenyaa Wayyaanoonni fi sheekichi waliin dhimma ittiin bahu fi Buna keenya gabaa adduunyaatti gurguratan fi wantoota biroo lammii biyyaa irraa eegaman guutuu adda dureen raawwanna garuu nuti akka lammii lammaffatti lafa keenya irratti ilaalamna.Qawwee fi Rasaasa ittiin nu ajjeesan,Yuniformii ittiin nu sodaachisan fi bottii ittiin nudhiitan numatu bitaa jira.
Kanaafuu uummanni Oromoo Qabeenyaa fi lafa isaa akkaataa wayyaneen fi namoonni isaanii kan akka sheekichaa itti fayyadamaa jiran gilgaaluu qaba.Yoo kana hin goone tahe gatii isaa bara baraan baasuun keenya shakkii hin qabu.
← Olympian Tirunesh Dibaba Win chicago Marathon 2017
M-TPLF Itoophiyaa tooftaa Rusiyaan Ameerikaa qoqqodaa turtetti fayyadamaa jirti. →
Kakuun bara kanaa maaf akkana bushooftee/ rakastee?
September 9, 2017 Biyyaan Boon Lammii Comments Off on Kakuun bara kanaa maaf akkana bushooftee/ rakastee?
Loltoonni Liyyuu fii Federaalaa uummata aanaa Moyaalee irratti Lola bananiiru
November 21, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Loltoonni Liyyuu fii Federaalaa uummata aanaa Moyaalee irratti Lola bananiiru
M-TPLF Itoophiyaa tooftaa Rusiyaan Ameerikaa qoqqodaa turtetti fayyadamaa jirti.
October 13, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on M-TPLF Itoophiyaa tooftaa Rusiyaan Ameerikaa qoqqodaa turtetti fayyadamaa jirti.